Missing Money Badbaadada Waayeelka
Miyaa adiga iyo waalidkaaga ogtihiin calamada cas ee khiyaamada? Sida waafaqsan Wakaalada Dhowrista Maalgeliyaha, mid ka baxsan shantii qofba oo ka wayn 65 ayaa ku dhacay khiyaamada maaliyada. Daraasadii u dambaysa waxay ku qiyaastay in dadka Maraykanka gaboobay laga khiyameeyay saddex bilyan ood oolar sanad kasta.
Hubso in waalidkaagu ogyihiin sida ay uga ilaalin karaan lafahooda khiyadam. Tusaale ahaan, waa inay iska ilaaliyaan siinta macluumaadka gaarka ah dadka aanay aqoon iyagoo ka jawaabaya fariimo moobil, iimaylo ama wicitaano, iyagoon eegin cida ay sheeganayaan inay yihiin ama halka ay sheegayaan inay ka soo wacayaa. Ka digtoonoow dhaqanada muujin kara waalidkaagu inuu yahay dhibanaha ka faa’iidaysiga dhaqaalah, sida biilasha aan la bixin, lacag la’aanta aan la sharaxin ama soo baxa muuqaalka kediska ah ee “saaxiib” cusub” Wa maxay qorshaha xaalada ay dhacdo arrimo garaadka ama dhibaatooyin kale oo caafimaad j=halka waalidkaagu aanu awood u yeelan inay daryeelaan dhaqaalahooda? Dhiirigeli waalidkaaga inay si rasmi ah u waydiiyaan qof ugu adeega sidii wakiilkooda caafimadka iyo dhaqaalaha ama awooda qareenka. Way wanaagsan tahay haddii waalidkaagu doorto qof ay aaminsanyihiin si ay u sameeyaan go’aanadooda dhaqaalaha. Haddii ay suuraga tahay, waa inuu ka jiraa heshiis gudaha qoyska oo ku saabsan cida lagu aaminayo masuuliyadahan. Qofku sidoo kale waa inuu lajoogteeyaa wada xidhiidhka cad ee dhammaan xubnaha qoyska. Halka ay waalidkaagu ku ilaashadaan kootooyinkoodu, xeerarka caymiska, iyo warqadda caddaymaha kale ee muhiimka ah haddii loo baahdo? Haddii caafimaadka qof waalid duq ah uu si kedis ah uga sii daro; kharashka ka baxsan jeebka ayaa ugu darsami kara si degdeg ah. Ka hadal dhammaan ilaha dakhliga iyo daboolida caymiska si go’aan looga gaadho haddii waalidkaagu uu dabooli karo daawaynta caafimaad ee aan la filayn. Haddii waalidkaagu aqbalaan, aqoon u yeelo laftaadu daboolidooda caymiska iyo hantida maaliyada sida lacagta la kaydsado, qorshayaasha hawl gabka, saamiyada, IRAs iyo qorshayaasha 401K. Dakhliga, hantida iyo caymiska waxay sameeyaan u qalmida Medicaid iyo doorashooyinka Medicare Waa maxay rabitaanka waalidkaaga ee hantidooda, guryaha, iyo tayada mustaqblaka ee nolosha?
“Waxaad ku qaamaysantahay lacag oo waxaad la kulmaysaa cawaaqib khatar ah.” Khiyaamoolayaashu waxay isticmaalaan macluumaadka dad waynaha si ay u helaan magaca iyo lambarka telefoonka. Inta badan waxay isticmaalaan farsamooyinka baqdin gelinta si aad lacag u soo dirto, u bixiso macluumaadka gaarka ah, ama ay u soo geli karaan kombuyuutarkaaga. Haddii qof ku soo waco oo uu doonayo inaad lacag dhiibto, aad uga shaki. Xusuuso, waxay u eegtahay inay aad u wanaagsan tahay inay run ahaato, maangal ahaan way tahay.